एप्पल ट्याबलेट कम्प्युटर विश्व बजारमा अग्रस्थानमा, दोस्रोमा सामसुङको उत्पादन « Lokpath
२२ श्रावण २०७८, शुक्रवार
काठमाडौं । एप्पल र सामसुङ इलेक्ट्रोनिक्सले ट्याब्लेट कम्प्युटरको बजारमा क्रमशः पहिलो र दोस्रो स्थान ओगट्न सफल भएका छन् ।
२१ औं काउन्टरपोइन्ट रिसर्चद्वारा ट्याब्लेट मार्केटबारे प्रकाशित बजार अनुगमन विवरणमा विश्वव्यापी ट्याब्लेट कम्प्युटरको बजार अघिल्लो वर्षको तुलनामा यो बर्ष ५३ प्रतिशतले वृद्धि भएको जानकारी गराइएको छ । गत वर्ष ट्याब्लेट बजारको वृद्धि दर १९ प्रतिशत थियो ।
यो बर्षको पहिलो त्रैमासिक रिपोर्ट अनुसार एप्पलले विश्वव्यापी ट्याब्लेट बजारको ३७ प्रतिशत हिस्सा ओगटेको छ भने सामसुङले २० प्रतिशत बजार पाएको छ ।
चिनियाँ टेलिकम कम्पनी हुवावेको ट्याब्लेट उत्पादनले गत बर्ष ११ प्रतिशत बजारसहित तेस्रो स्थान ओगटेकोमा यो बर्ष उक्त स्थान कायम राखेपनि बजार पहुँचमा मात्रै पाँच प्रतिशत स्थान रहेको अध्ययन रिपोर्टमा उल्लेख गरिएको छ ।
अमेरिकी सरकारले ठूलो संख्यामा चिनियाँ इलेक्ट्रोनिक्स, टेलिकम्युनिकेशन र हुवावेलगायत ड्रोन कम्पनीलाई कालोसूचीमा समावेश गरेका कारण हुवावेको बजारमा निकै गिरावट आएको हो ।
कम्पनीलाई कालोसूचीमा समावेश गरिएपछि यसले अमेरिकी कम्पनीहरूको स्वामित्वको ‘प्याटेन्ट’ र स्रोत प्रविधिहरू साथै अमेरिकी प्रबिधि समावेश गर्ने अंशहरू खरीद गर्न सक्दैन ।
यसबाहेक कालोसूचीमा रहेका कम्पनीहरू सूचीकृत हुन सक्दैनन् । स्मार्टफोन र ट्याब्लेटको पार्ट्स पाउन नसक्दा हुवावेले नयाँ उत्पादनहरुलाई बजारमा ल्याउन सक्दैन ।
सामसुङको ग्यालक्सी ट्याब एस–सेभेन लाइट हालै युरोपका धेरै देशहरूमा लोकप्रिय बनेको छ । ग्यालक्सी ट्याब एस–सेभेन लाइट उत्तरी अमेरिकी, यूरोपेली मुलुकहरूका शैक्षिक संस्थामाझ लोकप्रिय बनेको छ ।
प्रकाशित मिति: २०७८,असार,८,मंगलवार १५:०५
इरानका नयाँ राष्ट्रपतिद्वारा संसदसमक्ष शपथग्रहण
काठमाडौं । इरानका नयाँ राष्ट्रपति इब्राहिम रायसीले बिहीबार इरानी संसदसमक्ष शपथग्रहण गरेका छन् । आर्थिक सङ्कट, अमेरिकासँगको सम्वन्ध, स्वास्थ्य समस्या,
भारतमा कोरोना : पछिल्लो २४ घण्टामा थपिए ४३ हजार नयाँ संक्रमित
काठमाडौं । भारतमा कोरोना भाइरसबाट थप झण्डै ४३ हजार नयाँ सङ्क्रमित थपिएका छन् । सरकारी अधिकारीले बिहीबार दिएको जानकारीअनुसार पछिल्लो
काठमाडौं । सरकारी सुरक्षाकर्मीको सुरक्षा कारबाहीका क्रममा अफगानिस्तानमा एकैदिनमा २७४ तालिबान लडाकु मारिएका छन् । देशका विभिन्न प्रान्तमा भएका घटनामा
सेकेन्ड ह्यान्ड मोबाइल किन्दै हुनुहुन्छ ? ख्याल गर्नुहोस् यी ५ कुरा
काठमाडौं । के तपाई सेकेन्ड ह्यान्ड मोबाइल किन्ने सोचमा हुनुहुन्छ ? सेकेन्ड ह्यान्ड फोन किन्ने सोचमा हुनुहुन्छ भने केही कुराहरुमा
जसपा ठाकुर पक्षले आज तराईका चार जिल्लामा बैठक गर्दै
नेपालले पपुवा न्युगिनीसँग एकदिवसीय खेल खेल्ने
भूमि समस्या समाधान सम्बन्धी काम रोकिएको छैन : स्थानीय तह
टोकियो ओलम्पिक: अस्ट्रेलियालाई पराजित गर्दै बेल्जियमले जित्यो हकीमा पहिलो स्वर्ण,…
टोकियो ओलम्पिक: भारतका रवि कुमारले जिते कुश्तीमा रजत
नेपाल पक्षको केन्द्रीय कमिटी बैठक आज पनि बस्दै
इजरायलको रोजगारीमा ठगी धन्दा
नेपालमै पहिलो पटक केएमसीले सुरु गर्यो ‘रोवटिक सर्जरी’
‘संसद् बिजनेसविहीन हुँदा प्रभावकारी काम हुन सकेन’